Mon, Jul 23, 2018 | 01:55:13 NST
कर्नाटकमा पनि चल्यो मोदी लहर
जेठ १ – कर्नाटक विधानसभा चुनावको प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) बहुमततर्फ अगाडि बढेको छ ।
गाजा आक्रमणमा ५५ जनाकाे मृत्यु, २७ सयभन्दा बढी घाइते
जेठ १ – इजरायल र प्यालेस्टाइनको सिमा गाजा क्षेत्रमा इजरायेली सेनाले गरेको आक्रमणमा ५५ जना प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिएका छन् । २ हजार ७ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
जेठ १ – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसलाई दिएको चेतावनीका बारेमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेखेका छन् ।
इन्डोनेसियामा शृङ्खलाबद्ध आतंककारी हमला, दोस्रो दिन प्रहरी मुख्यालयमै आक्रमण
वैशाख ३१ – इन्डोनेसियाको दोस्रो ठूलो सहर सुराबियामा सोमबार दोस्रो दिन पनि आतंककारी आक्रमण भएको छ ।
इन्डोनेसियामा आतंककारी हमला, नौ जनाको मृत्यु, अरु कैयौँ घाइते
वैशाख ३० – इन्डोनेसियाको दोस्रो ठूलो शहर सुराबियामा रहेका तीन वटा चर्चमा आतंककारी हमला भएको छ ।
वैशाख २९ – धेरैले रिटार्यड हुने बेलामा सुनको घडी प्राप्त गर्छन् तर जेम्स ह्यारिसन त्योभन्दा पनि ठूलो उपहारका हकदार छन् ।
​डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा वार्ता हुने पक्का
वैशाख २९ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच जुन १२ मा सिंगापुरमा भेटवार्ता हुने निश्चित भएको छ ।
ट्रम्प र किमकाे भेट सिङ्गापुरमा हुने
वैशाख २८ – अमेरिका र उत्तरकोरियाली नेताहरूबीच हुने भनिएको लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको शिखर सम्मेलन आगामी जुन १२ मा हुने भएको छ ।
मलेसियामा ९२ वर्षका महाथीरले लिए प्रधानमन्त्रीको सपथ
वैशाख २७ – मलेसियाका नेता महाथीर मोहमदले ९२ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिहीबार सपथ लिनुभएको छ ।
वैज्ञानिकले रोजे इच्छा मृत्यु, १०४ वर्षमा आफू खुशी चोला बदले
वैशाख २७ – अष्ट्रेलियाका १ सय ४ वर्षका वैज्ञानिक डेभिड गुडअलको बिहीबार निधन भएको छ ।
बाँध भत्किँदा ३२ जनाको ज्यान गयो
वैशाख २७ – केन्याको नाकुरु प्रदेशमा रहेको एउटा बाँध भत्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गएको छ ।
​ट्रम्प तिमीले गल्ती गर्‍याै : खोमेनी, इरानी संसदमा ‘अमेरिका मुर्दावाद’
​९२ वर्षमा मलेसियाको प्रधानमन्त्री बन्दै महाथिर मोहम्मद, विश्वकै वृद्ध प्रधानमन्त्री बन्ने
वैशाख २७ – मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आम चुनावमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाले तीनजना अमेरिकी नागरिकलाई रिहा गर्‍याे, किम–ट्रम्पको भेटवार्ताको स्थान र मिति तय
वैशाख २६ – पछिल्लो समय उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधारका कामहरु निकै नै भैरहेको छ । त्यसै क्रममा उत्तर कोरियाले बुधबार तीन जना अमेरिकी नागरिकलाई रिहा गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओ अकस्मात उत्तर कोरियामा
वैशाख २६ – अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ अकस्मात उत्तर कोरिया पुग्नुभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीका रुपमा भएको उत्तर कोरियाको यो एक दुर्लभ भ्रमण हो ।
वैशाख २५ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग भएको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने बताएका छन् । उनले यो सम्झौता औचित्यहीन र बेकार भएकोसमेत बताएका छन् ।
यमनको राष्ट्रपति कार्यालय लक्षित बम विस्फोट, ६ को मृत्यु, ३० घाइते
वैशाख २५ – यमनको राजधानी सानामा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयलाई लक्षित गरी सोमबार आक्रमण भएको छ ।
वैशाख २४ – पाकिस्तानका गृहमन्त्री अहसान इकबालमाथि गोली प्रहार भएको छ ।
​ट्रम्पको नाङ्गो मूर्ति संग्राहलयमा प्रदर्शन गरिने
वैशाख २३ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाङ्गो मूर्ति अमेरिकाको एक संग्रहालयमा प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
​किलवेआमा ज्वालामुखीपछि शक्तिशाली भूकम्पको धक्का
वैशाख २२ – अमेरिकाको हवाई प्रान्तमा शुक्रबार किलवेआ ज्वालामुखी विष्फोटका कारण नजिकैको मरुभूमी क्षेत्रमा दर्जनौं शक्तिशाली भूकम्प गएका छन् ।
वैशाख २० – भारतको उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा बुधबार आएको धुलोयुक्त आँधीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक सय नाघेको छ । अरु धेरैजना घाइते भएका छन् ।
​ताजमहलले रंग फेर्न थाल्यो
वैशाख १९ – भारतको आगरामा रहेको ‘प्रेमको प्रतिक’ मानिने ताजमहलले आजभोली रंग फेर्न थालेको छ ।
रोहिंग्या समस्याबारे छानवीन गर्न अावश्यक रहेकाे राष्ट्रसंघकाे निष्कर्ष
वैशाख १९ – संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रतिनिधिले म्यानमारको रखाइन राज्यमा भएका अल्पसङ्ख्यक रोहिंज्या समुदायले भोगेको समस्याबारेमा उचित अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
​चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न फ्रान्स–अष्ट्रेलियाबीच साँठगाठ
वैशाख १८ – फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोन आज पहिलोपटक अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा सिड्नी पुग्नुभएको छ ।
​कागज नहेरी बोल्न नसक्ने राहुल गान्धी १५ मिनेट के बोल्लान् ? : मोदी
वैशाख १८ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीमाथि खनिएका छन् ।
वैशाख १८ – दक्षिण कोरियाले दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेको उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्यालय मङ्गलबारदेखि हटाएको छ ।
वैशाख १७ – फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने एक जनालाई सोमबार इन्डोनेसियामा पाँच वर्ष जेल सजाय दिइएको छ ।
काबुलमा अात्मघाती अाक्रमण, पत्रकारसहित कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गयो
वैशाख १७ – अफगानस्तानको राजधानी काबुलमा दुई अात्मघाती अाक्रमणमा पत्रकारसहित कम्तीमा २१ जनाको ज्यान गएको छ ।
​उत्तर कोरियाले मेमा आणविक भट्टी बन्द गर्दै
वैशाख १६ – उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक भट्टी आउँदो मे महिनामा बन्द गर्ने जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यलयले छिट्टै नै उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक भट्टीहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
​युट्यूब हेरेरै बच्चा पाएपछि...
वैशाख १५ – अमेरिकामा टिया फ्रीम्यान नामकी एउटी महिलाले ​युट्यूब हेरेर बच्चा जन्माएकी छिन् ।
​म्यान्मारको काचिनमा सेनाको हमलापछि हजारौँ सर्वसाधारण भाग्न बाध्य
वैशाख १५ –म्यान्मारको सुदूर उत्तरी राज्य काचिनमा सरकारी सेना र आदिवासी समुदायबीच फेरि तनाव सुरु भएपछि हजारौं नागरिक भाग्न बाध्य भएका छन् ।
इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानव बली : एक सय ४० बालबालिकाको कंकाल भेटियो
वैशाख १५ – पेरुमा ठूलाे संख्यामा बालबालिकाकाे बली चढाइएकाे घटना सार्वजनिक भएकाे छ ।
स्टालिन, माओ, पोलपोट हुँदै मून र ट्रम्पसँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध !
वैशाख १४ – सन् १९३९ बाट सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्धको १९४५मा समप्तिपश्चात् तत्कालीन कोरिया दुई भागमा विभाजित भयो ।